Mụọ maka sọftụwia efu na GNU / Linux na-etinyeghị ya | Site na Linux
Mụta Ihe ngwanrọ na GNU / Linux n'efu: Na-enweghị wụnye ihe ọ bụla.
Ọtụtụ iri afọ gara aga mgbe Free Software Movement wepụtara ma mechaa bụrụ njikọ nke ihe a maara ugbu a dị ka GNU / Linux, nke ahụ bụ, Linux dabeere na sistemụ arụmọrụ na mmemme agbakọtara n'okpuru echiche GNU.
Taata ihe okike, ojiji na mgbasa nke Free Software na GNU / Linux na-ahụzi site na «Teknụzụ-mmekọrịta mmekọrịta», otu obodo dị njikere igboju mkpa ọ dị iji mepụta ọrụ n'efu na n'efu Tupu mmepe na imirikiti mmepe nke Software nke Onwe, iji weghachite oge ọla edo nke ngwanrọ ebe mmepe nke kọmputa mbụ na mmemme kọmputa siri ike na agụmakwụkwọ.
1.1 Afọ iri nke 50s / 60s
1.2 Afọ iri nke 70s / 90s
2.1 Saịtị amụma
2.2 Ezigbo saịtị
2.3 Teknụzụ bara uru
Afọ iri nke 50s / 60s
Ọ bụ gburugburu 50s / 60s ka ndị otu na-ahụ maka sayensị na oge ahụ nke otu ndị ọkà mmụta sayensị kọmputa, ndị ọkà mmụta na otu ndị na-eme nchọpụta na-arụkọ ọrụ ọnụ, ha mere ọtụtụ sọftụwia emere dị ka obodo.
E kesara ha (Sistemụ arụmọrụ, Mmemme na Koodu Isi) site n'enyemaka nke otu ndị ọrụ ha, ha niile na ebumnuche na enwere ike gbanwee ha iji nweta nhazi na / ma ọ bụ ndozi dị mkpa.
Afọ iri nke 70 / 90
Na 70s ụdị omume a malitere ịgbanwe, ịga site na kọmpụta buru ibu ma dị oke ọnụ nke ụlọ akwụkwọ mahadum na ụlọ ọrụ gọọmentị yana ndị otu ya na ndị ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na-arụ ọrụ siri ike ma kwụsie ike Unix-like Operating Systems (ọtụtụ ndị ọrụ na ọtụtụ ọrụ) nye ndi oru pere mpe n'ime ulo oru nyocha nke onwe, nke bu sistemu eji aru oru.
Sistemụ Ọrụ Ndị Onwe na-enwewanye mmachi akara, nwebisiinka, ịgbazinye ego, inye ikikere, inye akwụkwọ ikike, tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nke gbochiri iji ha eme ihe bara nnukwu uru.
Ma n'oge a na ọgụ a megide ikike na mechiri emechi Software, kwa ubochi otutu ndi mmadu ndi no na ulo (ulo) na ndi okacha amara (oru) ha na amalite ma obu malite iji Free Software na GNU / Linux n'ike.
Ma na nchịkọta, akụkọ ihe mere eme nke Free Software na kpọmkwem GNU / Linux na-aga site na a maara nke ọma ihe omume nke Richard Stallman na 1984 mgbe o mepụtara ọrụ GNU na Linus Torvalds na 1991 mgbe ọ dere kernel yiri Unix maka kọmputa nke oge ahụ.
Inye ihe n'ihi njikọ nke ọrụ abụọ a Sistemụ arụmọrụ zuru ezu akpọ GNU / Linux, na ọ dị ka Unix nakwa na enwere ike ịgba ya na kọmpụta ụlọ (PC) nke oge ahụ. Na iru ụbọchị ugbu a ebe ọ na-emegharị maka ọtụtụ ụlọ, azụmaahịa na ụlọ ọrụ nyocha.
Ma ugbu a, na arụ ọrụ nke PC ugbu a, njupụta ha erutela n'ụlọ n'ihi oke ọnụ nke Akụrụngwa, yana mkpa na-eto eto iwelata mmefu maka ojiji, ndozi na mmelite nke sọftụwia nkeonwe, nke nyere ha ohere magburu onwe ya maka Free Software na GNU / Linux iji nweta ọnọdụ kwesịrị nsọpụrụ n'ime ọkwa ọhụrụ a nke ọha mmadụ ọmụma.
Mana, karịrị echiche ọ bụla banyere ụgwọ ma ọ bụ arụmọrụ gbasara sọftụwia nkeonwe, Ihe ngwanrọ a na - akwụ ụgwọ maka ọdịmma nke ụmụ amaala karịa ụlọ ọrụ, ọ na - adịwanye ọhụrụ ka ọ ghara ibelata nnwere onwe nke okike, iji, mgbasa, mmụta na mmegharị nke ihe ọmụma.
Ma ọ bụ n'oge a ebe Free Software dabara n'ụzọ zuru oke na ya anọ (4) nnwere onwe ma ọ bụ ụkpụrụ a dị mkpa nwa amaala mkpa. Ka anyị cheta na nnwere onwe anọ (4) nke Free Software bụ:
Yabụ, ịmụ ihe were sọftụwia iji sọftụwia dịka o kwere mee bụrụ ohere na mkpa a na-enwekarị. nke mere na nnukwu akụkụ nke oflọọrụ mmadụ na-akwadoghị sistemụ dị ugbu a nwere ike iji obi umeala dịrị na teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-eleghara mfu nke ikike ha nke Nzuzo, Nchebe na nnwere onwe na mkpokọta.
N'ezie, ọtụtụ n'ime mmalite na ndị ọhụrụ na mpaghara SL na GNU / Linux, ikekwe ọtụtụ n'ime ejiji ma ọ bụ mmasi, ka dị Ndị ọrụ ọdịnala nke Sistemụ Ọrụ Onwe (Windows / MacOS) na-amalite ụzọ ha ebe a n'ihi ọtụtụ ọgụgụ dị na SL na GNU / Linux na ọtụtụ puku ma ọ bụ nde weebụsaịtị (Blog, Magazines, Forums) ọkachamara na isiokwu ahụ., ma ọ bụ n'ihi na enyi gị ma ọ bụ onye ọrụ ibe gị gwara gị na ha na-eji ya n'ụlọ ma ọ bụ ọrụ.
Site na obere nzọụkwụ a, ikekwe ọtụtụ budata ma wụnye GNU / Linux Distro dị ka otu sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ abụọ na igwe ha iji banye isiokwu ahụ, nke na-adịghị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ma na m ahụmahụ ihe kachasị mma iji mezuo mgbanwe magburu onwe ya na mbugharị doro anya na SL na GNU / Linux na-agafe usoro 2 tupu nnabata ikpeazụ.
Nke mbụ bụ iji ọtụtụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ (GNU Program) na sistemụ arụmọrụ anyị ma gafere na nke abụọ na - ekwu banyere iji ya na ịmịkọrọ teknụzụ nke mpaghara ahụ na - ejikọtaghị ihe ọ bụla n'ụzọ doro anya ma ọ bụ n'ụzọ dị egwu, ya bụ, iji ya na-etinyeghị ya. Maka nke ahụ, enwere ụfọdụ weebụsaịtị na teknụzụ bara uru nke nwere ike ijere anyị ozi maka ebumnuche a, otu n'ime ha bụ:
Ebe nrụọrụ weebụ ndị a na-elekwasị anya n'ịchọgharị GNU / Linux Distro ọ bụla ma ọ bụ nke ochie n'ụzọ zuru ezu, na ọkwa dị iche iche nke teknụzụ nke nyocha na nyocha bara uru dị na ha. Kedu nke na-enyere mmụta oge aka banyere nke Distro iji ma ọ bụ bido iji ya na-enweghị ọtụtụ nsogbu ma ọ bụ enweghị ntụkwasị obi.
Onye Choro Choro
Linux Nkesa List
Ebe nrụọrụ weebụ ndị a na-elekwasị anya na ikwe ka anyị na-emekọrịta ihe n'ịntanetị na ezigbo ụzọ na ọtụtụ GNU / Linux Distros na ngwa ha na a yiri ụzọ dị ka ma ọ bụrụ na anyị nwere ya arụnyere na kọmputa anyị dịkwuo anyị larịị nke ezigbo ọrụ ahụmahụ na kwuru ngwaahịa mepụtara.
Teknụzụ bara uru
E nwere ọtụtụ teknụzụ nwere ikike dị na GNU / Linux World na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ dị ka MS Windows ma ọ bụ Mac OS, mana ọ nweghị onye dị mfe ịwụnye ma jiri dị ka VirtualBox. Teknụzụ ndị a na teknụzụ ndị ọzọ yiri ya na-enye ndị ọrụ ohere ịmegharị (rụgharịa) nwụnye na ojiji nke GNU / Linux Distros dị iche iche n'ụzọ 100% na-enweghị mkpa ịgbanwe ọrụ nke sistemụ arụmọrụ ha ugbu a.
Ọgbara ọhụrụ nke teknụzụ dị ugbu a na-abụ naanị maka oke ụgwọ, mmachi na ọghọm nke iji sọftụwia Nkeonwe, gbakwunyere na ndị gọọmentị ma ọ bụ Ngalaba Akụ na ụba na-anwa iji ha eme ihe n'ụzọ, na-enyocha ma ọ bụ na-achịkwa ọtụtụ ụmụ amaala site na ha.
Ma Free Software na GNU / Linux na-enye anyị ohere iji mee ka anyị dịrị ndụ, ihe ọzọ na akụkụ dị mkpa nke ngwanrọ dị ugbu a na-aga n'ihu na-emepe emepe na-abụghị azụmaahịa na ikike azụmahịa, ya bụ, ụmụ amaala na-emepe ya iche iche na otu otu site na ọdịmma ọjọọ.
Iji dozie afọ ojuju na ntụkwasị obi nke sọftụwia eji eme ihe anaghị emebi ikike anyị nwere na Nzuzo, Nchebe na nnwere onwe na mkpokọta Nnwere Onwe, na ọtụtụ mmadụ nwere ike imegharị ya na maka ebumnuche ọ bụla, na kwa ikike nke Free Software na GNU / Linux ka echekwaa oge, ya bụ, na Software enwere ike iji, mụọ, kesaa ma melite n'etiti mmadụ niile.
Anyị na-atụ anya na njikọ ndị enyere na akwụkwọ a na-enyere aka ịgbasa ihe ọmụma na ojiji nke Free Software na GNU / Linux enweghị isi nsogbu na-eme ka ndị ọrụ ọhụrụ ahụ jụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Mụọ maka Software na GNU / Linux na-enweghị wụnye ya
"O meela ọtụtụ iri afọ kemgbe Free Software Movement bidoro ma mechaa bụrụ njikọ nke ihe a maara ugbu a dịka GNU / Linux, ya bụ, sistemụ arụmọrụ Linux dabere na mmemme agbakọtara n'okpuru echiche GNU."
Gịnị mechara mee?
Kedu ihe kpatara ị jiri ewebata onye nọ ogologo oge dị otu a ma ọ bụrụ n'ikpeazụ ịgwaghị ihe mere "afọ ole gara aga"?
Zaghachi Pepito Grillo
A chịkọtara ihe mere na paragraf nke abụọ na n'ụzọ zuru ezu na isi 1.1, 1.2 na 1.3, mana nghọta bụ n'efu na nke onwe, yabụ, enweghị nsogbu ọ bụrụ na ị kọwapụtara ya n'otu n'otu.
Ekele m na agbanyeghị maka ịgụ na ịza ajụjụ na edemede.